Kiniinnada Shiinaha ee ugu Fiican - La cusbooneysiiyay Sebtember 2021 | Androidsis
Jose Alfocea | | Shiinaha Shiinaha, Kiniiniyada Android
Suuqa kiniiniyada uma sii eka sidii uu ahaan jiray. Kadib kobaca hore ee bilaabmay ku dhawaad ​​toddobo sano ka hor, rubuc ka dib rubuc iibka ayaa hoos u dhacay. Inta badan eedda waxay ku jirtaa ballantaas jaban ee ay awoodaan beddel kombuyuutarrada, wax hadda uun, iyo qayb ahaan, bilaabay inuu la kulmo. Dhinaca kale, kororka weyn ee cabirka shaashadda taleefannada gacanta, taas oo u horseedday isticmaaleyaal badan inay ka takhalusaan kiniinkooda (ama doortaan inaadan iibsan midkood) gaar ahaan kuwa leh cabbir u dhow midka taleefanka casriga ah, maxaa yeelay mobiilku wuxuu sameyn karaa si lamid ah kan kiniinka.
In kasta oo dhammaan waxyaabaha kor ku xusan, suuqa kiniinku ma dhiman. Soo-saarayaashu waxay sii wadaan inay sii daayaan moodooyin cusub ayna cusbooneysiiyaan kuwii ay suuqa ku haysteen. Waxaa jira kiniinno ku dhowaad dhammaan noocyada isticmaaleyaasha, iyo sidoo kale ku dhowaad dhammaan jeebabka. Haddii aadan weli haysan kiniin laakiin aad go'aansatay in la gaadhay waqtigii mid la qaadan lahaa, ama haddii aad hore u lahayd kiniin laakiin ay tahay waqtigii lagu cusboonaysiin lahaa moodal ka xoog badan oo fudud, maanta waxaan ku tusi doonaa waxay yihiin kiniiniyada Shiinaha ee ugu fiican xilligan iyo weliba, waxaan ku siin doonaa xoogaa talooyin waxtar leh si aad u dooran karto kaniiniga sida ugu habboon ugu habboon baahiyahaaga.
1 9 kaniini ee ugu fiican Shiinaha xilligan
1.3 Teclast X16 Awood
1.8 Midabka G708
2 Sida loo doorto kiniinka Shiinaha ugu fiican
9 kaniini ee ugu fiican Shiinaha xilligan
Horey u sii soco in xulashada soo socota ee kiniiniyada Shiinaha ee ugu fiican, laga yaabee, inaysan noqon doonin mid jecel dhammaan kuwa na akhriyaya, si kastaba ha noqotee, u qaado sidii hage, oo ah soo jeedin kaa caawin doonta doorashadaada iyo waliba talooyinkii aan horey u bixinay.
Waxaan ka bilaabaynaa kiniinkan nooca Chuwi. Waxaa laga yaabaa inay adiga kugu yartahay, waxayna u badan tahay inaad magaceeda ku arki doontid wax lagu qoslo, laakiin runtu waxay tahay inay ka mid tahay kiniinnada Shiinaha ee ugu fiican. Tani Chuwi Hibook Pro oo leh shaashad deeqsi ah 10,1 inches oo leh 2560 x 1600 qaraar, weyn 8.000 mAh baytariga gudahana waxaan ka helaynaa 5GHz afar geesle ah Intel X8300 Atom Cherry Trail Z1.84 oo ay weheliso Intel HD Graphic Gen8 GPU, 4 GB RAM iyo 64GB oo keyd ah gudaha ah oo aan ballaarin karno illaa 64 GB oo dheeri ah oo leh kaarka xusuusta. Laakiin sida ugu fiican oo dhan, waa kiniin laba jibbaar ah wuxuu la shaqeeyaa labada Windows 10 iyo Android 5.1.
Shirkadda weyn ee Shiinaha ee Xiaomi weligeed ma joojin karto sameynta muuqaal, halkanna waxaan ku leenahay iyada Xiaomi Mi Pad 2, kiniin leh naqshad aan fiicnayn, aad u fudud oo khafiif ah, xoogaana ka maamul badan kii hore. Waxay leedahay shaashad ah 7,9 inches, Intel Atom X5-Z8500 processor afar geesle ah, 2GB RAM, 16GB kaydinta gudaha ah iyo nidaamka hawlgalka Android 5.0 ee ku hoos jira lakabka qaabeynta sumadda MIUI.
Teclast X16 Awood
Haddii waxa aad rabto ay yihiin kiniin shaqo, markaa tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican. Waa Teclast X16 Power, aalad leh bandhig 11,6 inji, 4 GB oo RAM ah iyo labo nidaam oo lagu shaqeeyo Waxay la shaqaysaa labada Windows 10 iyo Android 5.1. Xaqiiqdii waxay umuuqataa sida laptop-ka kan kiniiniga, laakiin waa kiniin.
Ka dib qaabka "Awoodda" waxaan ku soo celineynaa sumadda tan Wax alaab ah lama helin., qalab ka "kiniin badan" kii hore, aad u badan oo la qaadi karo isla markaana leh naqshad aad ula mid ah kiniiniyada kale ee ku jira qaybteeda.
Xaaladdan oo kale waxaan ka heli a 7 inji shaashad HD buuxa ah oo leh 1200 x 800 megapixel resolution halka gudaha uu kujiro processor-ka 4 GHz afar geesle Intel T8500 Z1,44 oo gaari kara 2,24 GHz. 4 GB ee RAM iyo, mar labaad, labalaabnaanta nidaamyada hawlgalka: Android 5.1 iyo Windows 10.
Waxaan ku laabaneynaa magaca Chuwi si aan u tusno nooca kiniiniga Chuwi Vi10 Pro, aalad sidoo kale awood u leh inay maamusho laba nidaam oo hawlgal ah, Windows 8.1 iyo Android 4.4 oo leh Intel HD graphic (Gen 7) quad-core oo ah 2,16 GHz, 2 GB RAM iyo shaashad 10.6-inji ah.
Leh a naqshad aad u qurux badanSidoo kale waa mid dhaqaale ahaan aad u tiro badan, taas oo keeneysa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee kuwa doonaya kaniiniga in ka badan loo isticmaalo nuxurka shaqada.
Ereyada waaweyn waa tan Lenovo Yoga Tab 3 Pro X90F, kiniin cajaa'ib leh oo shaashad leh 10,1 inches IPS leh xallinta 1600 x 2560 gudaha kaas oo qariya 8500 GHz afar geesle Intel processor Z1,44 oo ay weheliso 2 GB oo RAM ah, 32 GB oo kaydinta gudaha lagu ballaarin karo kaarka xusuusta, Android 5.1 ahaan ahaan nidaam qalliin iyo 10.200 batari Mah oo ballan qaadaya a ismaamul “ilaa 18 saacadood” isla hal marna.
Laga soo bilaabo gacanta waxa hadda ah soo saaraha ugu weyn ee casriga ee Shiinaha ayaa tan ka yimaada Huawei Mediapad M2 10, kiniin cajiib ah oo shaashad leh 10,1 inji Full HD leh xallinta 1920 x 1200 megapixel. Gudaha waxaan ka helnaa processor HiSilicon Kirin 930 (oo ay soosaartay shirkadda Huawei lafteeda) oo leh sideed koronto oo leh xawaare saacad ah 2,0 GHZ. Waxaa la socda, 2 GB oo RAM ah, 16 GB oo ah kaydinta gudaha ee la ballaarin karo, 6.600 mAh baytariga, dareeraha faraha, 13 MP kamarad oo leh autofocus, f / 2.0 aperture iyo flash, iyo Android 5.1 Lollipop operating system oo hoos imanaya lakabka qaabeynta EMUI 3.1.
Haddii waxa aad rabto uu yahay kiniin wanaagsan oo aad u jaban, midabkan loo yaqaan 'Colorfly G708' waa mid ku habboon, gaar ahaan u adeegsiga marmar iyo ka soo qaad halkan illaa halkaan iyadoo ay ugu wacan tahay shaashaddeeda 7-inji HD ah iyo 1200 x 800 oo xallin ah, MediaTek MT6592 processor-ka 1,5 GHz , 1 GB oo RAM ah iyo Android 5.0.
Nooca 'Cube' ayaa horeyba loo yaqaan, gaar ahaan qaybta taleefannada casriga ah, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay qiimo jaban, kiniinno tayo wanaagsan leh sida tan Cube i10, oo ah qalab loogu talagalay 10,6 inches oo leh Intel Z3735F afar geesle ah 1,8 GHz processor, 2 GB oo RAM ah, 32 GB oo ROM ah iyo laba nidaam oo lagu shaqeynayo, Android 4.4 iyo Windows 10.
Sidii aan horeyba u sii filaynay bilowgii, tani waa soo jeedin kooban oo ah kiniinnada Shiinaha ee ugu wanaagsan ee aad ka heli karto suuqa hadda jira. Sidaad horeba u aragtay, badankood waxay "guji" isla muuqaalka: nidaamka qalliinka badiyaa laguma cusbooneysiiyo nooca ugu dambeeya, hase yeeshe, waxaan horey u ognahay inay tani tahay dhibaato soo jireen ah oo Android ah. Isaga oo iska indhatira tan, mid kasta oo ka mid ah moodooyinkii hore ayaa noqon doona iibsi wanaagsan, haa, ha ilaawin inaad markasta raadsato kaniiniga kan ku habboon baahiyahaaga, maahan midka aan cidina kuu sheegin inuu yahay kan ugu fiican ...
Sida loo doorto kiniinka Shiinaha ugu fiican
Waxaad horeyba u ogtahay in barnaamijka 'Androidsis' aan isku dayeyno inaanan noqon Manichean. Inkasta oo ay cadahay inay jiraan waxyaabo tayo fiican leh iyo waxyaabo tayo xun, hadana, hadana, waxaa kale oo jira kiniinno ka fiican kuwa kale, waxaan ku qanacsanahay in marka riixidu timaado in la shubo, sida dhacda markaan ka hadlayno telefoonada gacanta, kiniinka ugu fiican ayaa ah midka sida ugu fiican u buuxiya baahiyaha iyo filashooyinka isticmaale kasta oo gaar ahTaasi waa, laga yaabee adiga, oo aad ujecel ciyaarta video-ga, kiniinigaaga ayaa ugufiican, si kastaba ha ahaatee aniga, oo u heellan qorista iyo aqrinta waxqabadyada ugu waaweyn, tayda ayaa ugufiican. Anaguna labadeenuba waan saxanahay maxaa yeelay labadeenaba waxaan haynaa xalka ugufiican baahiyaheena.
Laakiin marka la yiraahdo, waxaa jira tiro ka mid ah sifooyinka aasaasiga ah ee ay tahay inaan marwalba ilaalino si taxaddar leh u xulashada mid ka mid ah kiniinnada Shiinaha ee ugu wanaagsan:
Nidaamka hawlgalka. Waa iska cadahay in halkaan aan ka hadlayno kiniiniyada ka shaqeeya Android laakiin xitaa ku dhagan nidaamkan, waa inaan doorannaa kaniini uu leeyahay noocii ugu dambeeyay ee markasta oo ay suurtagal tahay, in kastoo, sidaad ogtahay, taasi ay badanaa adag tahay .
Screen. Marka aan ka hadlayno shaashadda, waxaan ula jeednaa labadaba cabbirkiisa iyo tayadiisa. Adeegsiga degdegga ah, shaqada, ama haddii aad leedahay dhibaato xagga aragtida ah, shaashad ballaaran ayaa had iyo jeer lagula talinayaa. Intaas waxaa sii dheer, haddii aad u isticmaali doontid inaad ku daawatid filimaan badan iyo taxaneyaal ama aad ku ciyaartid ciyaaro, waxaad sidoo kale u baahan tahay muuqaal tayo wanaagsan leh, ugu yaraan, Full HD. Taas bedelkeeda, haddii aad siinayso isticmaalka marmar, waxaa laga yaabaa in shaashadda 7 ama 8-inji ay ku filnaan doonto.
Portability. Si toos ah ula xidhiidha cabbirka shaashadda ayaa ah qodobka la qaadan karo. Haddii aan doonayno inaan meel walba la aadno kiniinkeenna, sida ugu fudud ee ka sii fududaanaysa oo loo maareeyo, ayaa ah baahi aan saas ahayn haddii aan uun ka soo saarayno guriga.
Awooda iyo waxqabadka. Mar labaad, isticmaalka aan siin doonno kiniinkeennu wuxuu noqon doonaa mid muhiim ah. Way cadahay in la fiiriyo emaylka, maareynta shabakadaheena bulshada ama laga daawado fiidiyowyada YouTube, processor dhexdhexaad ah iyo dhowr gigabytes oo RAM ah ayaa ku filnaan doona. Hadda, haddii aan u adeegsan doonno inaan ku shaqeyno maareynta dhowr codsi isla waqti isku mid ah, ama aan ciyaarno ciyaaro hodan ku ah muuqaallo muuqaal ah, markaa waa inaan fiiro gaar ah u leenahay processor-ka, isku-duwaha, riwaayadaha RAM iyo, dabcan , sawirada.
Madax-bannaanida, taasi waa, awoodda batteriga, laakiin intaas kaliya maahan. Maskaxda ku hay in mararka qaarkood tirooyinku aysan ahayn wax walba oo u dhexeeya laba kiniin oo leh baytariyada isku midka ah, mid ayaa ka sii dheereyn kara kan kale maaddaama processor-keedu u adeegsado tamar badan si hufan.
Kuwani waa shanta dhinac ee lagama maarmaanka ah ee ay tahay inaan marwalba tixgalino marka aan bilaabayno hawsha xulashada kaniiniyada Shiinaha ugu fiican. Dabcan, naqshadeynta sidoo kale waa la tiriyaa, in kasta oo taasi horeyba u ahayd arrin dhadhan.
Oo hadda waxaan ognahay waxa la raadinayo, miyaadan wali iibsan kaniinigaaga Shiinaha?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Kiniiniyada Android » Kiniiniyada Shiinaha ee ugu fiican
Cajiib. Kula talin kiniiniyada leh Android 4
Looma baahna in lagu daro wax badan ayaan qabaa.